धुर्मुस, सुन्तली, रबि र कुलमानलाई मन्त्री बनाए हुन्न ? – पुरा पढ्नुहोस्……
धुर्मुस, सुन्तली, रबि र कुलमानलाई मन्त्री बनाए हुन्न ?
देशमा राम्रो काम गर्ने मनिसहरुको ठुलो खाँचो छ । देशमा इमान्दारिता देखाउने र काम गर्ने मानिसहरु खोज्ने हो भने औलामा गन्न सकिन्छ । चहाने हो भने देश बनाउन गाहे छैन । देशका लागी प्राण आहुति गर्ने मानिसहरुको कमी भएको पनि होईन । धेरै शहिदहरुले देशको लागी रगत बगाएका छन र बलिदानी दिएका छन । जहाँनिय राणा शासनको बिरुद्धमा आवाज उठाएकै भरमा गंगालाल श्रेष्ठ,दशरथचन्द्र ठाकुर,धर्मभत्त माथेमा,शुक्रराज शास्त्रीहरु देखि लिएर लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र ल्याउँदा सम्म सयौँ मानिसहरु शहिद भईसकेका छन ।
नेपालमा शहिदको संख्या दैनिक झै बढेको छ । राजनीतिक दलका सामान्य कार्यकर्ता समेत शहिदका रुपमा दर्ज भएका छन । सच्चा शहिदको समेत अपमान भएको देशमा यस्ता कुरा गर्नु नै बेकार छ । तैपनि देशका लागी केही गर्छौ भनेर लागेका मानिसहरुको खडेरी चाँही पक्कै छैन देशमा । तर् त्यस्ता मानिसहरुले अबसर पाउँदैनन र बिरलै पाएपनि उनीहरुलाई जसरी भएपनि गलत साबित गर्न हरसम्भव प्रयास हुने गरेको छ । देश बनाउने हो भने देशका लागी सच्चा समाजसेवा गरिरहेका ब्यत्तिहरुलाई अबसर दिनुपर्छ । जो सँग कुनै स्वार्थ जोडिएकै छैन र उनीहरु जसरी भएपनि देश बनाउने अभियानमा लागेका छन ।
देशमा लालबाबु पण्डित,जनार्दन शर्मा,गोकर्ण बिष्ट,गगन थापा जस्ता नेताहरु देश बनाउन लागी नपरेका होईनन । उनीहरुले देशका लागी नगरेका पनि होईनन् तरपनि उनीहरुलाई साथ सहयोग भने बिरलै भयो । गोकर्ण बिष्ट उर्जा मन्त्री हुँदा उनले आमुल सुधार गरे त्यसपछि फेरी उनको मन्त्री बन्ने पालो आएन् । भलै लालबाबु फेरी मन्त्री भएका छन । उनलाई कत्तिको साथ मिल्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । देशमा बामगठबन्धनको सरकार भएका कारण गगन मन्त्री हुने कुरै भएन जनाद्र्धनको पनि पालो आउन् समय कुर्नुको बिकल्प नै छैन । अरुले केही गरेनन भन्ने होईन तरपनि उनीहरुले आफनो कार्यकालमा जे गरे अरुले त्यो गरेको भए देश अहिले यो अबस्थामा पक्के हुने थिएन ।
यिनीहरुलाई नेतृत्व दिँदा के हुन्छ ?
पछिल्लो समय बिभिन्न सामाजिक र सुधारात्मक कामबाट चर्चामा आएका केही ब्यत्तिहरुले वाहवाही कमाएका छन । उनीहरु नेता भएर भन्दा पनि समाजसुधारक काम गरेर चर्चा बटुल्न सफल भएका हुन । कलाकार सिताराम कट्टेल ९धुर्मुस० र कुञ्जना घिमिरे ९सुन्तली० जस्ले सरकारले अर्बो सहयोग रकम आँउदा समेत गर्न नसकेको काम गरेर देखाईदिए । पुननिर्माण मन्त्रालयले एउटा जनताको लागी टहरो बनाउन नसकेको समयमा उनीहरुले ३ वटा नमुना बस्ती नै बनाएर हस्तान्तरण गरे । उनीहरुलाई धेरै ठाँउमा भगवानकै रुपमा हेर्नेको कमी छैन । उनीहरुले गरेको काम सरकारले गरेको काम भन्दा सयौँ गुण महत्वपुर्ण र लाभदायक रहेको छ ।
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको कामको चर्चा नहुने कुरै भएन । दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ भईरहेको मुलुकमा उनले कतिपय ठाँउमा लोडसेडिङमुत्त शहरकै रुपमा कार्यन्वयन गरे । उनले गर्दा खेरी भएको स्रोत साधनले पनि गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण दिए । उनको कामको प्रशंषा गर्नेको कमी छैन ।
सञ्चारकर्मी रबि लामिछाने जो एउटै टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत लाखौ नेपालीका मनमा बस्न सफल भएका छन । सरकारले गर्न नसकेको दर्जनौ काम उनी एउटै कार्यक्रम मार्फत पनि गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण पेश गर्ने ब्यत्ति हुन । आखिर यी ४ जना ब्यत्तिले गर्दा त यति काम हुन्छ भने सरकारले गर्ने हो भने के हुन्न रु मन्त्री बन्ने र देशको ढुकुटी मात्र रित्याउने खेलमा लागेकाहरुले अब सोच्ने बेला आएको छ । नेपालका सरकारका मन्त्री भन्दा एउटा ब्यत्ति लोकप्रिय छ । उस्ले गरेका काम महत्वपुर्ण छन । आखिर बिना भिजनका ब्यत्तिलाई मन्त्री बनाउनु भन्दा यी ४ ब्यत्तिलाई मन्त्री बनाएर कामको जिम्मा दिने हो भने देशको मुहार फेरिन् केही समय लाग्दैन । देशका मन्त्री र प्रधानमन्त्री यसैगरी राजनीतिक दलका नेताहरुसँग उनीहरुलाई मन्त्री बनाउने आँट छ ? साभार: पुर्बेलीन्युजबाट
Posted in रोचक, स्वास्थ्य/ जीबन शैली
Prevआजको राशिफल: वि.सं. २०७४ फाल्गुन १३ गते आइतबार | ईश्बी सं. २०१८ फेब्रुवरी २५ तारिख-हेर्नुहोस तपाइको आजको भाग्यफल !
Nextनेपाल बचाउने हो भने नेपाल बिगार्ने आइएनजिओ हरुलाई लखेट्नुपर्छ: रबि (भिडियोसहित)
मेरो दाजु भाउजु धुर्मुस–सुन्तलीलाई तुरुन्त जेल हाल सरकार –कुमार कट्टेल “जिग्री”
अनमोल केसीद्वारा अभिनित चलचित्रको विशेष शोमा पुगे चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने यसरि सबै झुमिय (भिडियो)
सन्दिप आइपिएल टोलीमा परे। भारतीय रुपैंया २० लाख मा बोलि लगाउँदै खरिद गर्यो